UManenzhe ubona zihamba kahle izinto kwiPirates
June 26, 2021 Impempe.com
UPhumudzo Manenzhe, owake wayibamba kwi-Orlando Pirates, uthi ayikho nencane inkinga ngaleli qembu laseSoweto futhi yena ulibona lenza kahle kakhulu.
IBucs inabadlali abahle kakhulu kodwa abalandeli bayo banakho ukungajabuli yize iwine iMTN 8 ngesizini edlule. Kukhona nabacanga ukuthi umqeqeshi uJosef Zinnbauer liyamehlula iqembu ngoba abadlali bakhona kodwa uyena oxova isikimu.
IBucs isanda kuqasha uMandla Ncikazi ozoba sethimbeni labaqeqeshi, kanti kunamahlebezi okuthi uSteve Komphela naye uzoya kuleli qembu. Empeleni sekukhona abashoyo ukuthi uZinnbauer ngeke esabuya eGermany ngoba abaphathi beBucs bafuna ukushintsha izinto eqenjini.
Ebuzwa uManenzhe ukuthi ngabe kushoda kuphi, uthe yena akakhali ngalutho, kunalokho ujabule ngendlela izinto ezenzeka ngayo kwiBucs.
“Ngiyakuzwa ukuthi wena ubuza njengentatheli kodwa angivumelani nawe ngoba ibhola alidlalwa kanjalo. Kumele ubheke isizini edlule. IPirates iqede endaweni yesithathu ngesizini ka-2019/2020 bakwazi ukuyodlala kwiConfederation of African Football (CAF).
“Ngesizini edlule babhukule kakhulu. Baqede endaweni yesithathu futhi yibona abayiqembu ebelivimba kahle emuva. Lokho kuchaza ukuthi bathuthuke kakhulu futhi banendebe abayiqukulile.
“Indebe nendlela abavimba ngayo emuva kusho lukhulu kakhulu. Okubalulekile ukuthi sakhele phezu kwalokhu esesikwenzile, yikho ngingavumelani nokuthi iPirates ayenzi kahle,” kusho uManenzhe.
Le ngwazi ebuye isebenze eSABC Sport njengomhlaziyi webhola, iyinxusa leCarling Black Label Cup ka-2021 ezodlalwa e-Orlando Stadium, eSoweto. Lo mdlalo uzoba ngo-Agasti 1.
FUNDA NALA: Iyabaxhila abaphathi bakaMargeman eyokweqiwa yijezi kwiSundowns
“Ngicabanga ukuthi abadlali abasadlala njengamanje kubalulekile ukuthi uziphatha kanjani enkundleni nangaphandle kwayo, ukuze uzakhele igama ukwazi ukuphila ngemuva kokuyeka ibhola. Ukuziphatha kahle ngaphandle kwenkundla kubalulekile ukuze ukwazi ukuheha izinkampani ezizokwazi ukusebenzisana nawe.
“Ngiyajabula ukuthi ngothando loMdali ngikwazile ukuphila le mpilo ebengiyiphilayo. Nokuthi ngiyakwazi ukuheha izinkampani ezifana neCarling Black Label, ngibe yinxusa labo, ngenze umsebenzi nabo. Ngiyajabula futhi ngiyabonga ukuthi ngisebenzisana neSABC.
“Akukho okutheni okubalulekile ngami kodwa kungamandla oMdali. Ngiyajabula ukuba seThekwini ngizosebenza neCarling. ICarling kuhlale kuyindebe okumnandi ukumataniswa nayo.
“Lapha ngithola ithuba lokumela iqembu engangilidlalela iPirates ngikwazi ukujabulisa nokufundisa amaChampion Coaches. Yinto engiyijabulelayo nengingathandayo ukuyenza ngoba ithinta ibhola,” kubeka uManenzhe.
Previous Previous post: Lisamudla igoli likaNurkovic athi kwakungafanele livunywe oweWydad
Next Next post: Sayivulela isahluko eyayingasazi iWydad, kusho uZwane weChiefs